Maaddooyinka caanka ah ee ku yaal suuqa Waqooyiga Ameerika bishii Luulyo 2020 - Medicinerawmaterials.com
Alaab noocee ah ayaa caan ka ah suuqa Waqooyiga Ameerika dhowaan? Shabakada Waqooyiga Ameerika Waxyaabaha Ay Ka Kooban Tahay Waxay Ka Faa'ideysatay Mashruuca Xogta Weyn si loo soo koobo ereyada adeegsadayaasha adeegsigooda 'baadi goobka sare ee bilihii la soo dhaafay (marka laga reebo badeecadaha internetka), taas oo aan ka eegi karno dalabkii ugu dambeeyay ee suuqa, sidaasna ku helno fursado ganacsi. iyo ku guuleysiga meel badan oo loogu talagalay horumarinta wax soo saarka. Waxyaabaha kulul ee la baaray, 5-HTP, Bamboo iyo Beta Alanine ayaa kaalinta seddexaad galay. Haddii aad leedahay badeecadahan caanka ah ee soo socda, fadlan la xiriir medicrawmaterials.com oo u oggolow inay ku ciyaaraan qiimeyntooda barxadda!
Weli wax saad ah ma jiraan, waxaana laga yaabaa inaan sugno illaa dhammaadka Luulyo ama horraanta Ogosto. Qiimaha wuxuu noqon karaa kudhowaad $ 160- $ 170 / kg kayd cusub. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah maaddooyinka caanka ah ee lagu yareynayo walaaca, waxaa la filayaa in dalabku uu sii xoogeysan doono inta ka harsan sanadka
Qiimaha ayaa waxyar kordhi doona sababtoo ah sahayda oo adag.
Inta badan warshadaha Faytamiin C-gu waxay si habsami leh u wadaan wax soo saarkoodii, qiimuhuna wuu siman yahay halkii uu ka kici lahaa labadii bilood ee la soo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, buundada DC97 wali wey ku jirtaa yaraansho, laakiin waxaan u maleyneynaa in yaraanta ay si dhakhso leh ku dhammaan doonto iyadoo la heli doono waxyaabo badan oo bilaabaya Toddobaadyada soo socda, waxaan u maleyneynaa in Ascorbic Acid uu xasilloonaan doono, sicirkuna uu jilci doono.
Maaddaama qiimaha alaabta Ascorbic Acid uu sarreeyay labadii bilood ee la soo dhaafay, qiimaha Ascorbyl Palmitate ayaa sidoo kale kordhay si dhakhso leh iyo sahay adag. Sikastaba, waxaa lafilayaa in qiimaha uu waxyar hoos udhigo xagaaga iyadoo qiimaha Ascorbic Acid uu noqonayo mid jilicsan.
Badeecadani waa mid aad loogu baahan yahay labadaba Hindiya iyo Qiimaha Mareykanka waa mid deggan, si kastaba ha noqotee, kaydinta ayaa adag.
Warshadaha waaweyni waxay ka dhigayaan sicirka iyo sahayda mid deggan iyadoo hawsha dib u furista si wanaagsan loo qabtay. Mustaqbalka Beta Glucan wuxuu u muuqdaa mid wanaagsan sababtoo ah faa iidooyinkiisa caafimaad.
Iyada oo hawsha dib loo furayo, soo-celinta ayaa soo noqotay, warshaduhuna waxay bilaabeen inay sheegaan oo ay amar qaataan. Waxaan soo jeedinaynaa in talaabooyinka la qaado ASAP si loogu diyaariyo kaydka maxaa yeelay xagaaga ayaa soo dhowaanaya marka la xidho dayactirka ayaa dhacaya.
Kalsiyum Ascorbate / Sodium Ascorbate
Warshadaha badankood waxay ku mashquulsan yihiin alaabada ceeriin ee soosaarida Ascorbic Acid. Soosaarida sodium iyo kalsiyum cusbada wali kuma filna inay daboosho baahida, qiimuhuna wuxuu ku jiraa heer sare. Qaar ka mid ah warshadaha cusubi waxay isku dayayaan inay soosaaraan kuwan, laakiin hakad ayey ku jiraan sababo la xiriira ogolaanshaha saadaasha dawladda. Waxaan u maleyneynaa in sicirka uu xasili doono heer sare illaa xagaaga.
Waxyaabaha taxanaha ah ee loo yaqaan 'Carnitine'
Sahaydu wali waa mid aad isugu dheellitiran oo leh dalab yar oo adag. Soosaarayaasha waawayn ujeedkoodu maaha inay kordhiyaan awooda xakamaynta wasakhda darteed. Way adagtahay in warshado cusubi soo dhex galaan taas awgeed. Waxaan u maleyneynaa in tani sii socon doonto inta sanadka ka hartay haddii aaney soo gelin warshado cusub.
Sicirka ayaa waxyar kordhi doona maxaa yeelay qiimuhu wuxuu ku socdaa meel hoose oo meerto ah.
Qiimaha ayaa kor u kici doona waxyar sababtoo ah kharashka kordhay, oo ay kujiraan xakamaynta aafada, xamuulka, maaraynta, iwm.
Qiimaha iyo waxsoosaarku waa kuwo xasilloon oo waxaan u maleyneynaa inay sii socon doonaan illaa dhammaadka sanadkan.
Baahida iyo keenista ayaa isku dheelitiran hadda ganacsiga caalamiga ah, markaa ma jiro isbeddel fara badan oo xagga qiimaha ah. Baahida Shiinaha ayaa bilaabatay inay kordho sababtoo ah wacyiga dadka ee sii kordhaya si ay u qaataan kaabis.
Qiimaha ayaa kordhay 10-15% dalabkuna wali waa adag yahay.
Qiimaha wax soo saarka Glucosamine ayaa hoos u dhacaya qayb ahaan sababo la xiriira faafida iyo hoos u dhaca dalabka. Dhinaca kale, ilaa xad, alaabada gulukosamine-ga ah ee khamiirku waxay saameyn ku yeelanayaan suuqyada wax soo saarka glucosamine ee qolofta / goos gooska.
Digirta Qaxwaha Cagaaran
Xiritaanka Hindiya awgeed, shirkadeena ugu weyn ee Shri Ahimsa ayaa hadda ku soo noqotay wax soo saarka waxayna diyaarinaysaa keyd cusub bisha Luulyo. Qiimaha badeecada GCE waa mid deggan.
Suuqa L-Glutamine hadda waa yara jahwareersan yahay. Xigashada Shiinaha ayaa ka sareysa sicirka suuqa Mareykanka, taas oo micnaheedu yahay qiimaha waxsoosaarka ayaa ka sarreeya, laakiin saamiyada laga heli karo Mareykanka weli wey sii socon karaan in muddo ah.
Qiimaha ayaa hoos u dhacaya. Waxsoosaarka Shiinaha ayaa si wanaagsan u socda, waxaana laga yaabaa inay jirto arin si xad dhaaf ah loo dulsaaray bilaha soo socda.
Qiimaha iyo sahaydu hadda waa deggan yihiin.
Qalabka bilowga si xasilan ayaa loo bixiyaa, laakiin qiimaha ayaa waxyar kordhay, marka qiimaha MSM sidoo kale waxyar wuu kordhay.
Baahida iyo qiimaha waa xasiloon yihiin.
Qalabka bilowga ah waxaa loo bixinayaa si deggan, laakiin qiimaha ayaa waxyar kordhay, marka qiimaha MSM sidoo kale wuu kordhay.
Qiimuhu waxyar wuu yaraan doonaa sababtoo ah qiimaha ayaa sarreeyay tan iyo bishii Febraayo, laakiin hadda, waxsoosaarku si wanaagsan ayuu u socdaa, helitaankiisuna wuu soo fiicnaanayaa.
Dabiiciga Caffeine Anhydrous
Badeecadeena ugu weyn ee Hindiya wali wey xiran tahay. Tani waxay saameyn ku yeelatay keenitaankeenna Caffeine Anhydrous; oo hadda wajahaya agab adag.
Qiimaha ayaa waxyar kordhay sababtoo ah kororka sicirka maaddada. Isticmaalka Niacinamide ee qurxinta si loo caddeeyo ayaa si weyn kor loogu qaaday. Tani waxay si weyn u kordhin doontaa baaxadda suuqa ee wax soo saarkeeda mustaqbalka.
Qiimaha iyo keydku way xasilloon yihiin.
Qiimaha iyo keydku way xasilloon yihiin. Dhowr warshadood ayaa furay khad cusub oo wax soo saar iyo tayo sare loo qaaday si loo daboolo baahida sii kordheysa.
Qeybintu waxay sii wanaajinaysaa wershadaha ku yaal Hubei oo dib loo furay. Qiimaha maaddada bilowgu hoos ayuu u dhacay sababo la xiriira qiimaha saliidda oo dhowaan hoos u dhacay, marka, sicirku waa deggan yahay laakiin jilicsan yahay
Fitamiin A & D
BASF iyo DSM labaduba waxay shaaciyeen arrinta tayada alaabta la bilaabayo, iyo bixinta bilaha Juun iyo Julaay waa la joojiyay. Baahida ayaa yara yaraatay, markaa natiijada awgeed, sicirku xoogaa wuu adag yahay laakiin wuu deggan yahay.
Qiimaha ayaa inyar yaraaday. Waxay ahayd dib u soo laabasho sare bishii Febraayo haddana waxay ku sii socotaa wadadii dib ugu laabashada heer macquul ah. Helitaanku wuxuu ku sii fiicnaanayaa soo saarista iyo socodka.
Vitamin B12 (Cyanocobalamin iyo Methylcobalamin)
Waxaa jira laba xarumood oo wax soo saar oo cusub oo ka soo baxaya Ningxia iyo Hubei. Helitaanku wuxuu kusii jiri doonaa qaab wanaagsan qiimahana wuxuu ahaan doonaa mid deggan oo heer macquul ah oo hooseeya.
Faytamiin E (Sintetik)
Waxsoosaarka Shiinaha sifiican ayuu usocdaa, laakiin Yurubta, waxsoosaarka warshadaha waaweyn ayaa saameyn ku yeeshay. Sida Vitamin A oo kale, qiimuhu waa adag yahay, laakiin lama filayo inuu waalli noqdo.